U-Svetlana Bondarchuk akayithinti indandatho yokuzibandakanya.
Ngenkathi kukhona ingxoxo ekhukhumayo mayelana nezindaba zakamuva ezihlobene nomshado ozayo weFyodor Bondarchuk kuPaulina Andreeva, umshayeli wangaphambili womqondisi wanquma ukwabelana ngesithombe se-idyll yomndeni.
Esikhathini esithombeni, uSvetlana Bondarchuk ashicilele namuhla ekhasini lakhe ku-Instagram, indodana ye-cinematographer, indodana endala yomlingani uSergey kanye nabazukulu ababili bomshado abashadile abhalwe phansi. USvetlana wayenomsindo omfushane, eshiya kuphela ukuhlaziya - "Ububele".
Abhalisele ngokushesha bashiya ukuncoma okuningi ngaphansi kwesithombe. Wonke umuntu wazi ukuthi uSvetlana unomndeni omuhle. Ngendlela, ngaphambi kokuba uSvetlana Bondarchuk angabhubhisi abalandeli ngezithombe zomyeni wakhe. Isithombe sanamuhla sasiyena owokuqala ngemuva kokumemezela ngokusemthethweni isinqumo sokuhlukanisa. Isithombe esisodwa, esithunyelwe ekhasini likaSvetlana namuhla, siboniswa kanye nomzukulu wakhe omdala. Ababhalisile baqaphele ukuthi eminwebeni yesandla sokunene sikaSvetlana kukhona namanje isalathisi sokubambisana, futhi ngaphezulu kwayo yindandatho enamatshe amakhulu amhlophe.
Abadlali abadumile abangu-7 abafa ngesikhathi sokuqopha
UJeanne Epple uyadabuka intsha esedlule
Abavikeli bezilwane bahlasela i-Xenia Borodina, ividiyo
Umshado kaVampire waseVodonaya washaqisa abasebenzisi bewebhu
Izikhombisa eziyisikhombisa zikanina omuhle
Ilayisi nama-prawn othosiwe ngesiShayina
Ukuqeqesha: Ukusesha kwamakhasimende okusebenzayo
Ukupheka Okubambisana Ngesikhumba Sezinyosi
Indlela yokudoba inkukhu - izindlela zokupheka ezihamba phambili zokubhaka, ukudoba kanye nokushisa ama-shish kebab
Ngingaya engxoxweni yabasebenzi besifazane okhulelwe?
Izingane ezisenesikhathi eside emndenini omkhulu
Ukwakhiwa kwamakamelo okugumbana kwabantwana bezocansi ezahlukeneyo
Imizwelo ithinta kanjani impilo yomuntu?
I-Lemon mousse nama-blackberries
I-charm piquant yabesifazane